अन्तर्वार्ता – Nepal24News
काठमाडौं – हामीले शुरु गरेको जागरण अभियान दुई दिनमै समाप्त हुने अभियान होइन। यो कांग्रेस र सिंगो नेपाली राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने अभियान हो।सिंगो राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने भनेपछि आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस पहिले शुद्धिकरण हुनुपर्छ।पार्टी शुद्धिकरणको अभियान दुई दिनमै सकिने कुरा होइन यसले लामो समय लिन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङले खरो प्रश्नमा कुराकानी गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। राजनीतिमा जितले मात्र कद बढाइदैन,कहिलेकाहि राजनीतिमा त्यागले पनि कद बढ्छ। २०४६ को जनआन्दोलनपछि राजा विरेन्द्रले गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दा उनले कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर भट्टराई प्रधानमन्त्री भट्टराई बनेका थिए।त्यतिबेला गणेशमानले प्रधानमन्त्री जस्तो पद स्वीकार नगरेर राजनीतिक कद बढाएको गुरुङले स्मरण गरे।त्यस्तै देउवाले आफै सभापति भएको बखतमा पार्टीको हार
बाह्य लुक्सले प्रभाव पार्दैन बाह्य लुक्सले फरक पार्दैन । भन्नुको मतलब जीवनसाथीका लागि रोज्नुपर्दा म उसको भित्री गुणमा फोकस हुन्छु । बाह्य रूप क्षणिक र भित्री गुण जीवन्त हुन्छ । मान्छेको व्यावहारिक गुणले नै हो जीवन्त हुने भनेको । बाह्य लुक्स एकदम आकर्षक भएको व्यक्ति देख्दा जोकोहीले हेर्छ, तर आफ्नो लाइफ पार्टनरका रूपमा भने भित्रि गुण नै हेरिन्छ । भनिन्छ नि ‘पुस्तक किन्दा खोल हेरेर नकिन्नु ।’ त्यस्तै हो जीवनसाथी रोज्दा पनि । म्याचुअर्ड हुनुपर्छ मेरो जीवनसाथी व्यवहारले म्याचुअर्ड, जस्तोसुकै अवस्थालाई ह्यान्डल गर्न सक्ने, आफ्नो अडानमा रहन सक्ने हुनुपर्छ । परिपक्वता उमेरले भइन्छ भन्ने होइन । त्यस्तो हुनुभएन । अडिग विचार भएको हुनुपर्छ । मान्छेको बुझाइको दायराले हुने हो । कतिपय १६ वर्षेहरू पनि विचारले सारै परिपक्व हुन्छन्, कतिपयको ५० वर्ष पुग्दा पनि बचपना व्यवहार हुन्छ । मेरो जीवनसाथी व्यावह
हिमानी शाहको जन्म अक्टोबर १, १९७६ मा नेपालमा भएको हो । हिमानी भारतको राजस्थानको शिखर राज्यका राजपुत विक्रम सिहं र विपुला सिहंकी पुत्री हुन् । सूर्यवंशी सिखवत राजपूत उनले ग्यालेक्सी पब्लिक उच्च माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकी हुन् । तत्कालिन युवराज पारससंग विवाहबन्धनमा बांधिएसंगै उनी अधिराजकुमारी भइन् । दरबारहत्याकाण्डपछि ससुरा ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए, पारस र हिमानी राजउत्तराधिकारी । पूर्व अधिराजकुमारी भएता पनि हिमानी सरल स्वभावकी देखिन्छिन् । देश गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएपछि उनी हिमानी ट्रष्टमार्फत समाज सेवामा सक्रिय छन् । तीन सन्तानकी आमा हिमानीको सौन्दर्यबाट प्रभावित नहुंने सायदै कोही होला । विरलै संचारमाध्यमसंग बोल्ने हिमानीले नेपालआजको म्यागजिन प्रकाशन होपका लागि दिएको अन्तवार्ता यहां साभार गरिएको हो । हिमानी ट्रष्ट कस्तो संस्था हो ? हिमानी ट्रस्ट नेपालका गरिब व्यक्तिलाइ सहयोग
मीना ढकाल हास्य कलाकार,मनोज गजुरेलकी पुर्व पत्नी हुन्। मन्त्र फेशन डिजाइन कलेक्शन नयाँ बानेश्वारमा संचालन गर्दै आएकी ढकाल गीत संगीतमा पनि उत्तिकै रुची राखेकी छिन् । वैवाहिक सम्बन्ध टुटेपछि उहाँका गीतले बजारमा चर्चा पाइरहेको आवस्थामा समाजिक संजालमा समेत टिका टिप्पणी भइरहेको छ। उनको समाजिक संजालमा समेत टिका टिप्पणी भएको कुरा लगायत अन्य विषयमा कमान्डर दैनिकका सम्वाददाताले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अशः मिना ढकाल जी सन्चै हुनुहुन्छ ? सन्चै छु, मन्त्र बुटिक कलेक्शन सञ्चालन गरी रहेकी छु । छोरी स्कुल जान्छ आउँछ,उसलाई सघाउदै कस्टमर सँग डिल गर्दै दिन बित्छ । व्यवासय तपाईको रुची कि बाध्यता ? बुटिक मेरो रुची हो । मैले समय समयमा आफुले तयार पारिएका डिजाइनहरुको फेशन सो पनि गरेकी छु । फेशन प्रति युवा, युवतीको क्रेज बढेको छ । सचेत छन , दैनिक जीवन चलाउनको लागि पेश त गर्नु प¥यो नि । वैवाहि
Jan312018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
सुशिल नेपाल काठमाडौं । गायक बद्री पंगेनीसंग मिलेर एमालेको चुनावी गीत ‘मै पनि एमाले’गाएपछि एकाएक चर्चामा आएकी गायिका हुन प्रिया भण्डारी । सोभन्दा अघि केही गीत गाईसकेकी भएपनि चुनावी गीतले उनको हाइप निकै माथि पुर्यायो । उनको परिचय गायिका मात्र भने होईन् । उनले गीत गाउनुभन्दा मोडलिङ धेरै गरेकी छिन् । तिज, लोक, आधुनिक, पप गरि डेढ दर्जन बढी गीतमा स्वर दिएकी तथा त्यो भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरेकी प्रिया अबका दिनमा मोडलिङ भन्दा गायन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने बताउँछिन् । उनिसंग डिसी नेपालले गरेको छोटो कुराकानि । दिनहरु कसरी बित्दैछन् ? अहिले विभिन्न जिल्लामा मेला–महोत्सवहरु भईरहेका छन् । मेला, महोत्सव लगायत विभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रममा बोलाईरहनु भएको हुन्छ । त्यो बाहेक गीत गाउने र म्युजिक भिडियोमै समय दिईरहेकी छु । अध्ययनलाई पनि संगसंगै अगाडि बढाईरहेकी छु । तपाईलाई स्र
Jan292018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
नायिका पूजा शर्मा नेपाली फिल्म क्षेत्रमा निकै चर्चित छिन र उनले फिल्म प्रेम गित बाट धेरै फ्यानहरु बनाउन पनि सफल बहेकी हुन् । कुनै बेला छोरी भएर जन्मिएकै कारण परिवारको बहिष्कारमा परेकी थिइन उनी । त्यो घटनाले उनलाई संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने सिकायो । उनले हिम्मत हारिनन् । मनलाई बलियो बनाउँदै आत्मविश्वासलाई दृढ बनाएकी उनले आमा दुर्गा सापकोटाको जीवन पाठशाला जस्तो बन्यो । जीवनको वास्तविकताबारे बुझ्न र भिज्न उनलाई आमाको जीवन र समर्पण नै ठूलो किताब थियो । उनी हुन् नायिका पूजा शर्मा । नपाली सिनेमा जगतमा चिनिएकी नायिका हुन् उनी । त्यो बेला, जब उनको जन्म भयो– उनको जन्मले परिवारमा एक किसिमको तहल्का नै मच्चायो । छोराको आश गरेका परिवारमा छोरी जन्मिएपछि सबै निराश भए । पारिवारिक खटपट र समस्या झेलेपछि पूजाका बाबुले दोस्रो विवाह गरे । छोरीको सुनौलो भविष्यकै लागि उनकी आमा सिन्धुपाल्चोकको गाउँ छोडेर काठमाड
Jan242018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
चर्चित गायिका कोमल वली नेकपा (एमाले)बाट राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारका लागि क्षेत्र नम्बर ५ बाट चयन भएकी छिन् । सोमबार राति बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले उनलाई उम्मेदवार चुनेको हो । यस अघि उनी एमालेबाट प्रतिनिधि सभाको चुनावमा लड्ने भने पछि चर्चामा आएकी थिइन् । तर एमालेले उनलाई प्रतिनिधि सभाको लागि टिकट दिएन । प्रस्तुत छ गायिका तथा एमाले नेतृ वलीसँग दैनिक नेपालका हेम रोकाहाको कुराकानीः राष्ट्रियसभाको लागि टिकट पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ ? खुसी नै लागेको छ । म त प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्ने तयारीमा नै बसेको मान्छे हुँ । अहिले यस्तो गरीमामय पदको लागि लड्दै छु । पार्टीले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएको छ । यसले मनोवल उच्च पार्ने काम भएको छ । म निकै खुसी छु । तपाईले टिकट पाउँदा सामाजिक सञ्जाल तिर त आलोचना पो भयो नि ? मैले टिकट पाएँ भन्ने कुरो हिजो राति मात्रै थाहा पाएकी हुँ । मैले अहिले
Jan232018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
रञ्जना लम्साल, कावासोती राधिका माझी उमेरले भर्खर २१ बर्ष पुगिन् । तर उनको विहे भएको ५ वर्ष पुरा भयो । घरमा उनी,श्रीमान र दुई बर्षकी छोरी छन् । सम्पत्तिको नाममा एउटा सानो घर छ । ज्याला मजदुरी गरेर गुजाराचल्छ । दुवै श्रीमान् श्रीमति घर बनाउने श्रमिक हुन् । दुईजनाले दिनमा १ हजार कमाउँछन् । राधिकालाई अहिलेको काम प्रति कुनै गुनासो छैन । तर आफ्नो गाउँबाट कोहि महिला विदेश जाने रे भन्ने सुन्दाउनको खुट्टा थरथर काँप्छ । भक्कानिएर रुन मन लाग्छ । शरीर भारी हुन्छ अनि विदेश नजानुसदुःख हुन्छ भन्न मात्र मन लाग्छ । त्यहाँ पुगेर आफूले कुटाई खाएको, लुटिएको कुरा सुनाएर विदेशजान ठिक्क परेकाहरुलाई विदेश जानबाट रोकौं भन्ने पनि लाग्छ । तर उनलाई घर परिवार, समाजलेके भन्ला ? आफू लुटिएको कुरा बताएर कसरी बस्न सकिएला भन्ने त्रासले बोल्न रोक्छ । आफ्नोभविष्य सम्झेर उनी चुप लाग्छिन् । विदेश जानु अघि १६ बर्षकी
Jan202018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
शिरदेखी पाउसम्म सुनै सुनले सजिएका उनलाई सबैले बाईसमुन्द्रे भनेर चिन्दछन् । उनको बास्तविक नाम सुवास घिसिङ हो । शरीरभरी ३० तोला सुन र ५० तोला चाँदी लगाएर हिड्ने पेशाले उनी व्यबशायी हुन् । धनकुटाबाट अन्तरजातीय विवाह गरेपछि काठमाडौ छिरेका घिसिङ मिलिजुली बातावरण नेपाल प्रालिका अध्यक्ष हुन् । यातायात व्यवशायमा पनि शात हालेका घिसिङका ७ बस रहेका छन् । हेर्दा चलचित्रका खलनायक जस्ता देखिने काठमाडौँ बाताबरण र सरसफाई पनि ठुलो योगदान दिएका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो :
Jan192018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
म अमेरिका हैन ‘म ललितपुरको भट्टेडाँडामा छु, प्रहरी अधिकारीसँगै छु’ – नवराज सिलवाल
आइजिपी प्रकरणदेखि चर्चामा आएका नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी नवराज सिलवाल आइजिपी नभए पनि चर्चामै छन्। विशेषतः अदालतमा पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कीर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान सुरु भएपछि उनको चर्चा सेलाएको छैन।प्रहरीले उनीविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ। बयानका लागि सिलवाललाई उपस्थित गराउन प्रहरीले पटक/पटक पत्राचार गरेको छ। तर, उनी फेला पर्न सकेका छैनन्। कतिपयले सिलवाल अमेरिका रहेको बताएका छन् भने कोहीले देशभित्रै रहेको दाबी गरेका छन्। तर, सिलवाल कहाँ छन्? उनलाई हामीले सोध्दा जवाफमा भने, ‘म अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नै छु।’ प्रस्तुत छ सिलवालसँग सविन ढकालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी। अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? म अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नै छु। कार्यक्षेत्र भनेको कहाँ हो? म अहिले ललितपुरमा नै छु। तपाईँ मलेसिया गएको छु भन्नुहुन्थ्यो । कहिले फर्किनुभयो? म एउटा कार्यक्रममा गएको